Lahatsoratra tsy mbola novakiana • Lahatsoratra 13
Joined: 23 Mey 2016, 19:01
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Numan28 » 19 feb 2017, 17:18
Salama! Nentiko ilay fonosana A330-300-200.
Saingy tsy misy VC ao amin'ny Turkish Airlines A330-300:
Misy afaka manampy ahy ve?
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 19 feb 2017, 19:09
Misy dikan-teny roa ao anaty fonosana, iray ny POSKY, ny iray tsy manana VC. Ny iray hafa nataon'i Thomas Ruth dia manana VC.
Tsy misy ahiahy, raha apetraka tsara ny zava-drehetra, dia samy manana ianao.
Andao fantaro raha misy olana hafa.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Numan28 » 19 feb 2017, 19:19
Iza amin'izy ireo no dikan-ny POSKY ary iza no dikan-teny Thomat Ruth?
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 19 feb 2017, 20:32
Rehefa misafidy ny fiaramanidina ianao dia misy lisitra latsaka ambany 3, na menus: mpanamboatra fiaramanidina, mpanonta ary karazana fiaramanidina. Kitiho ny mpanonta, safidio i Thomas Ruth. Aza manahy raha mahita an'i Thomas Ruth-Luis Quintero ianao, dia zavatra iray ihany.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Numan28 » 19 feb 2017, 20:38
Tsy misy a330-300 na 200 misy seza mpandeha ary VC ve?
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 19 feb 2017, 21:19
huh .... tsy misy dikany ny momba an'io, tena. Tahaka ny nolazaiko fa ny A330 avy amin'i TR dia miaraka amin'ny VC, saingy manana kabinera mpandeha izany, tsy fantatrao. Manana fonosana mitovy amin'ilay izy nefa efa tsy miraharaha ny kabinetra aho, tsy nitady azy io aho.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Numan28 » 19 feb 2017, 22:21
Saingy tsy misy ny A330-300 avy amin'i thomas ruth dia misy ny dikan-teny, ary hoy ianao fa tsy misy VC izy ireo
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 19 feb 2017, 22:47
... oh lehilahy .....
OK, alao aloha, ny rohy mankany amin'ny fonosam-piaramanidina nalainay
Faharoa, avy any ho any sa toerana hafa?
Fahatelo, apetraka tsara ve io?
Ity no iray ananako:http://www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/6/799
ary izao, amin'ny ahy FSX Manana TR A330-300 ambony aho ary mihazakazaka. Ka mba omeo fampahalalana bebe kokoa izahay.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 20 feb 2017, 08:34
Dariussssss nanoratra hoe: dieny izao, ao amin'ny my FSX Manana TR A330-300 ambony aho ary mihazakazaka. Ka mba omeo fampahalalana bebe kokoa izahay.
Eny ary, enina mianadahy ao anaty F-14 aho, nisy sisin'ny sidina nofantsihana anao nanomboka tamin'ny nanambarana anao ho lasibatra ..... Nalefa handrehitra aho raha nanao zavatra diso ianao. .....
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 20 feb 2017, 10:21
Ny tsy nety nataoko? Tena nanao izay vitako aho nanampy teto. Raha nisy diso na nolazaiko na nataoko dia miala tsiny aho fa tsy dia hitako izay nataoko.